सामलिङ पावरको आइपीओमा कति पर्यो आवेदन ? आवेदकको ओइरो ! - Nepali News
nepalinewsglobal October 23, 2021
सामलिङले बिहीबार (कात्तिक ४ गते) देखि ७ लाख ३० हजार कित्ता आइपीओ जारी गरेको हो । जसमध्ये २% अर्थात् १४ हजार ६ सय कित्ता कर्मचारी र ५% अर्थात् ३६ हजार ५ सय कित्ता म्युचुअल फन्डको लागि छुट्याएको छ । बाँकी ६ लाख ७८ हजार ९ सय कित्ता सर्वसाधरणका लागि खुला गरिएको हो । लगानीकर्ताले कात्तिक ८ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् ।
कम्पनीको आइपीओमा १ अर्ब १३ करोड ८६ लाख २३ हजार रुपैयाँ बराबरको आवेदन परेको छ । बिक्री प्रबन्धक नेपाल एसबीआई मर्चेन्ट बैंकिङका अनुसार शुक्रबार दिउँसो २ बजेसम्म ९ लाख ४८ हजार ४०५ जनाले १ करोड १३ लाख ८६ हजार २३० कित्ताका लागि आवेदन दिएका छन् । यो माग भन्दा १६.७७ गुणा बढी आवेदन हो ।
सामलिङ पावरको आइपीओलाई रेटिङ्ग एजेन्सी इक्रा नेपालले इक्राएनपी डबल बी माइनस रेटिङ्ग दिएको छ । यसले कम्पनीले वित्तीय दायित्व पूरा गर्न सक्ने सम्बन्धमा मध्यम जोखिम रहेको जनाउँदछ । लगानीकर्ताले सि–आस्वा प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा मेरो सेयरमार्फत सेयर भर्न सक्नेछन् ।
Tags: new ipo
Previous: पाँजोमै उम्रियो धान – मर्कामा किसान